TCM Decoction - Hospital Shijiazhuang Yiling
Dhaqanka decoction daawo Chinese waa nidaam Firdhisan xarunta dareere ah. Waxaa ugu horreeya oo nooca ugu ballaaran loo isticmaalo in Shiinaha. Waqtigan xaadirka ah, daawo Chinese ayaa weli si weyn loo isticmaalaa in rugta.
Sababta sababta decoction ee dawada Chinese ayaa la isticmaalo kun oo sano waa sababta oo ah diyaarinta dabacsan samaynta, qabsado baahiyaha kala TCM syndrome iyo daaweynta, iyo saamaynta ay ku badan yahay si degdeg ah, laakiin inta badan dhadhan qadhaadh yahay .
In si loo xakameeyo tayada daawooyinka ee isha iyo in la hubiyo saamayn daaweyn sare. Yiling dawooyinka ayaa dhisay halis ah oo beero iyo taranta saldhig qalabka TCM qaybaha kala duwan ee Shiinaha, halkaas oo waa meesha ugu haboon koritaanka qalabka nooc oo kala duwan. Dhamaan daawooyinka ka samaysan yihiin oo ka mid ah qalabka, daawooyinka tayada sareeya.
TCM decoction uu saameyn weyn ku kansarka daaweynta, scleroderma, atrophy muruqa ah, laabotooyinka, cudurada neuron motor, fibromyalgi, diabetes, nephropathy, iyo noocyada kale ee cudurrada iyo xaaladaha daran.
La tasho khubaro su'aalo gaar ah.